कुन बैंकमा पैसा राख्दा सबैभन्दा बढी ब्याजदर पाइन्छ ? हेर्नुहोस् तथ्यांक
काठमाडौं : तपाईंसँग पैसा छ तर के गर्ने अलमलमा हुनुहुन्छ भने मुद्दति निक्षेपमा पैसा जम्मा गर्नुहोस् । बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा आकर्षक ब्याजदर दिंदै आएका छन् । मुद्दति निक्षेपलाई समान्यतयाः सुरक्षित लगानी मानिन्छ ।
केही समयअन्तरालसम्म पैसा पनि नचाहिने र जोखिम पनि बहन गर्न नसक्ने हो भने मुद्दति निक्षेप उपयुक्त हुन्छ । निक्षेप राख्दा कस्तो संस्थामा राख्ने भन्नेमा निक्षेपकर्ता सचेत हुनुपर्छ । जोखिम मोल्न नचाहने लगानीकर्तालाई मुद्दति निक्षेप लगानीको लागि राम्रो ठाउँ हो ।
बैंकहरुले भद्र सहमतिको नाममा निक्षेपको ब्याज दरमा ‘कार्टेलिङ’ डेढ वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । बजारमा तरलता अभावको सुरु भएसँगै बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने होडबाजी नै चालाए । यसबेला बैंकहरुले बचतको ब्याज ११% र मुद्दतिको ब्याज १४% सम्म पुर्याए । तर यो धेरै लामो समयसम्म टिकेन । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा रोक्न दबाब दिएसँगै वाणिज्य बैंकबीच पुसमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.२५% र बचतमा ६.५०% ब्याज दिने भद्र सहमति भयो । यसैअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज दिंदै आएका छन् ।
हेरौं कुन वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा कति प्रतिशत ब्याजदर दिंदै छन् :
के हो मुद्दति निक्षेप खाता ?
मुद्दति खाता ३ महिना, ६ महिना, १ वर्ष, २ वर्ष र ५ वर्षसम्मको एउटा निश्चित समय अवधि तोकेर रकम जम्मा गरिन्छ । यस खातामा राखेको पैसाको ब्याजदर पनि बचत खाताको भन्दा केही बढी नै हुन्छ । तर, तोकेको समयभन्दा पहिले नै रकम निकाल्न नमिल्ने हुँदा बीचमा रकम आवश्यक पर्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा मात्र यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बीचमा रकम आवश्यक परेमा यस्तो खातामा जम्मा गरेको रकमको प्रमाणपत्र धितो राखी बैंकहरुबाट कर्जा निकाल्न त मिल्छ । तर यसका लागि पनि रकम झिक्न केही समय लाग्ने हुन्छ । यसप्रकार ऋण लिँदा आफूले मुद्दति निक्षेपमा पाउने ब्याज दरभन्दा केही प्रतिशत वढी ब्याज बैंकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।